कोरोना महामारीे, असुरक्षित क्वरेन्टाईन र स्थानीय सरकारको भुमिका | PBM News.com
कोरोना महामारीे, असुरक्षित क्वरेन्टाईन र स्थानीय सरकारको भुमिका
नेपालमा कोरोना (कोविड–१९) संक्रमितको संख्या दिनहँु बढ्दै गएको छ । भारत संगको खुल्ला सिमाना र हजारौंको संख्यामा विभिन्न नाका हुँदै हजारौंको संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम जारी भएसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमण तीब्र रुपल बढ्दै गएको छ । नेपालमा एकै दिन शुक्रबार १ सय ७० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यो आज सम्मको उच्च कोरोना संक्रमित संख्या हो ।
त्यस्तै नेपालको कपिलबस्तु जिल्लामा कोरोना हट स्पोर्ट बन्दै गएको छ । कपिलबस्तु जिल्लामा दिनहुँ नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या थापिनु र स्थानीयहरु पनि संक्रमित हुदै गरेको देखिनु, सुरक्षित क्वारेन्टाइन व्यवस्था समेत नहुँदा स्थानियहरु त्रसित भएका छन् ।
अझ कपिलबस्तु जिल्लामा विभिन्न स्थानमा बनेको क्वारेन्टाइन बाट पटक–पटक त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरु भाग्ने गरेको सामचारले त झन्, कपिलबस्तुको क्वारेन्टाईनको अवस्था कस्तो छ, होला ? भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यही सोमबार मात्रै कपिलबस्तु जिल्लाको श्री सुन्दर प्राविको क्वारेन्टाइनबाट ३० जना भागे । पछि उनिहरुलाई पुनःक्वारेन्टाईनमा फर्काइयो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो समुदाय, परिवार कतिको सुरक्षित होला ? क्वारेन्टाईनबाट भाग्ने अवस्था कसरी आयो ? के क्वारेन्टाईन भाग्नको लागी बनाईएको हो ? यि यस्ता धेरै प्रश्नहरु धेरैको मनमा उब्जिरहेको होला । सर्वसाधरणले मनमा उब्जिरहेका यि यस्ता प्रश्नहरु बारे गम्भिर हुनु पर्छ । स्थानीय निकाय, प्रशासनिक कार्यालय र समुदाय समेत गंभिर हुनु जरुरी देखिएको छ ।
क्वारेन्टाईनमा बस्ने व्यक्तिहरुकोे मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ । उनीहरु क्वारेन्टाईन बाट भाग्नुको पछाडी के–के कारणहरु छन्, त्यस बारे गम्भीर हुन आवश्यक छ । सकिन्छ भने प्रशासनिक निकायहरुले गंभिरता पूर्वक मनो विमर्श कक्षाहरु, योग व्ययाम, मोटिभेसन शीप र आफूहरु किन १०÷१५ दिनको अवधि वस्नु परेको हो स्पष्ट पार्न जरुरी छ । हुन त नगरपालिका वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना रोकथामका लागि विविध कार्यक्रम नगरेको होईन फेरी पनि जिल्ला, नगर र वडाहरुमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको
कोरोना संक्रमितलाई रोकथामको लागि अब त्यति गरेर मात्र पुग्दैन ।
गत हप्तामात्रै कपिलबस्तु जिल्ला बाणगंगा नगरपालिकमा जनताको सेवामा क्रियाशील एक वडा अध्यक्ष र बुद्ध अवाज संचारगृमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई समेत कोरोना संक्रमित पुष्टि भयो । जनप्रतिनिधी र फ्रन्टलाईनमा समाजमा समाचार संकलनको काममा संग्लन पत्रकारलाई कोरोना पुष्टि हुँदा समेत नगरपालिकाले अस्पताल सम्म पु¥याउनको लागि एउटा एम्बुलेन्स व्यवस्था समेत गर्न नसक्नु । विरामी वडा अध्यक्ष आफै स्कुटर र पत्रकार प्रहरीको गाडीको सहरा लिएर बुटवल कोरोना उपचार केन्द्रमा पुग्नु प¥र्यो । यस महामारीबाट व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारको उदासिनता छरपष्ट देख्न सकिन्छ । आफ्नै नगर जनप्रतिनिधीहरु, पत्रकारहरु संक्रमित हुँदा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गर्न नसक्ने नगरले आम सर्वसाधरण संक्रमित हुुँदा कसरी व्यवस्थ्या गर्ला ? तसर्थ सम्पुर्ण जनताहरु आफै सचेत र सजकभई आफ्नो सुरक्षाको लागी आफै ध्यान दिन जरुरी छ ।
कपिलबस्तु जिल्ला प्रशासनि निकायहरु, स्थानीय नगरपालिका, वडाकार्यालय र जनप्रतिनिधीहरु लाई थप जिम्मेबार र उनीहरुलाई आफ्नो वडा, नगरहरुमा चुस्तदुस्त रुपले कोरोना (कोविड–१९) रोकथामको लागि परिचालन गर्न र योजना अनुरुप निर्देशित कामहरु उपर अनुगमन गर्नु र देखाउनकालागि भन्दा पनि साच्चीकै सेवा दिईएको भान हुने गरि सरोकारवाला, स्वयमसेवक, जिम्मेवारी लिएका समुहहरु परिचालित हुनु आवश्यक छ । हालका दिनमा अहिले जिल्ला भित्रको जोखिम आश्रय स्थल संचालनमा तदरुकताका साथ टोलटोलमा समुदायको सहयोग आश्रय स्थल वन्नु सकारात्मक कुरा हो तर पनि कतिपय सन्र्दमा भने आश्रय स्थल संचालनमा निकै कमजोरी देखिदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । क्वारेन्टाईन बनाए पनि त्यसलाई व्यवस्थित रुपले संचालन गर्न सकेको छैन ।
हालै, भारतको हरियाणा बाट आएका बाणगंगा ८ ढोडेकोल (सुकुम्बासी) बस्तीमा बस्ने रुकमान गिरी अहिले जनसेवा नि.मा.वि उदयपुर क्वारेन्टाईनमा बस्दै आएका छन् । गिरीले क्वारेन्टाईनमा बस्ने मनिसहरुलाई कुकुर विरालोको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको र कसैले आफुहरुलाई वास्ता समेत नगरेको गुनासो सुनाए । उनले भने–‘क्वारेन्टाईनमा बस्ने मनिसहरुलाई हेर्न दृष्ट्रिकाणमा परिवर्तन हुनुपर्छ । क्वारेन्टाईनमा बस्दैमा कोरोना संक्रमित छ भनेर घृणा पनि गर्नु हुँदैन । हामीलाई छिटो भन्दा छिटो चेक जाँच हुन पर्छ । हामीलाई पनि त आफ्नो परिवार छरछिमेकको माया छ ।’
क्वारेन्टाईनमा बस्दै आएका गिरीले आफुहरुसंगै बसेका साथीहरुको छिट्टै चेक जाँचको व्यवस्था मिलाई दिन माग समेत गरेका छन् । गिरी जस्तै धेरैको समस्या उस्तै छ । गिरी त केवल एउटा प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । अहिले कपिलबस्तुका विभिन्न ठाउँका क्वारेन्टाईनमा बस्ने नेपालीहरुको समस्या यस्तै–यस्तै छ । अहिले कपिलबस्तु जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च रुपमा बढ्दै गएको छ । अहिले कपिलबस्तु जिल्लामा कोरोना संक्रमित १ सय ८८ पुगिसकेको छ । शुक्रबार मात्रै कपिलबस्तुमा थप एक जना पत्रकार सहित ५१ जनामा कोरोन पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलबस्तुले जनाएको छ । अहिले कपिलबस्तु जिल्लामा ५ जना पत्रकारहरुलाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । हुन त फ्रन्ट लाईनमा सुचनाहरु जनतालाई पु¥याउने क्रममा पत्रकार संक्रमित हुनु नौलो कुरा होईन । फेरी पनि कपिलबस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकामा पत्रकार र वडा अध्यक्ष समेतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा धेरैलाई कोरोना संक्रमितहुन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । बाणगंगा नगरपालिकाको जनप्रतिनिधी र पत्रकारहरुलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसंगै स्थानियहरुमा त्रास हुनु स्वभाविक हो ।
अहिले स्थानीयहरु छिटो भन्दा छिटो प्रत्येक वडा टोल–टोलमा कोरोना परिक्षणको लागि स्वाव जाँच हुँनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसैबीच बाणगंगा नगरपालिकाले यही बुधबार १ सय ५२ जनाको स्वाव भने संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले सिद्धार्थ क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा रहेका कोराना संक्रमित व्यक्तिहरुको कन्टयाक्ट ट्रेसिङमा आएका १३ जना जनप्रतिनिधि, २८ जना नगरका कर्मचारी, १७ जना संचारकर्मी र १५ जनाक्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु र अन्य समुदाय स्तरका ७९ जना गरी १५२ जनाको स्वाव संकलन गरेको हो ।
यत बाणगंगा नगरपालिका केही वडा अध्यक्षहरुले आफ्नो वडाहरुको सुरक्षको लागि समुदाय स्तरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरी वडा बासीको सुरक्षाको क्रियाशिल भएर आफुहरु काम गर्दै आएको बताउँछन् ।
बाणगंगा नगरपालिका वडा ८ का वडा अध्यक्ष गुणनिधी भुसालले कोरोना संगको लडाईमा समुदाय स्तर बाट अगाडी बढ्दै गएको बताए । उनले पछिल्लो समय कपिलबस्तुमा तीब्र रुपले कोरोना भाईरसका संक्रमितहरु बढ्दै गएको हुँदा यसलाई रोकथामको लागि आफुहरुले वडाको ४ स्थानमा क्वरेन्टाईनको व्यवस्था मिलाएकोे जानकारी गराए ।
त्यस्तै बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष सुकदेव थारुले पनि कोरोना (कोविड–१९) संगको लडाईमा सम्पूर्ण नेपालीहरुको सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने–‘कोरोना संगको लडाईमा जनप्रतिनिधी, सुरक्षकर्मी, स्वस्थ्यकर्मी र पत्रकारहरु मात्र लागेर हुदैन । सवै सचेत नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनी, आमाबुवाहरुले अ–आफ्नो ठाउँबाट कोरोना लडाईमा सहयोग र सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ ।’ बाणगंगा नगरपालिका वडा ९ का वडा अध्यक्ष धुब्र बेलबासेको भनाई पनि उस्तै छ । उनले आफ्नो वडाको सुरक्षको लागि टोल विकासको अगुवाईमा युवा परिचालन गरेको जनकारी दिए । उनले समुदायको सुरक्षा र कोरोना (कोविड–१९) रोगथामका लागी वडाले बाणगंगा नगरपालिका वडा ९ मा बालकल्यण आधरभुत विद्यालय वर्दहवामा १४ जनालाई क्वरेन्टाईनमा बस्दै आएको र दैनिक क्वरेन्टाईनमा थापिने क्रम जारी रहेको बताउँछन् ।
हुन त जिल्लाका केही वडा अध्यक्ष जनाप्रतिनिधीहरुले कोरोना रोकथामका लागी आफ्ने ज्यानलाई जोखिमा राखेर जनताको सेवा नगरेको होईनन् । उनीहरु जनताको सेवामा काम गर्दा गर्दै कोरोना संक्रमित हुन पुग्छन् । जो रात दिन जनताको सेवामा क्रियाशिल छ । जो गरिब, दुखी, मजदुर, श्रमिक बर्गको उद्दारको लागि काम गर्दा गर्दै संक्रमित हुन पुग्छन् । त्यस्त व्यक्तिहरुको स्थानिय सरकारले एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन । क्वरेन्टाईनबाट भाग्ने र आउने यस बारेमा चाँसो नदिने, स्थानिय निकायले क्वरेन्टाईन स्थनहरु बृद्धि गर्दै जाने तर त्यहाँ सुरक्षा र गुरस्तरका संयन्त्र नअपनाउने । यो भन्दा लचार र स्थानिय सरकारको उदासिनता के नै हुन सक्छ ? अतः यि यस्ता विषयमा गम्भिरताका साथ स्थानीय सरकार लचारिपन र उदासिनताले काम हुँदैन । जनताको सुरक्षाको लागि विशेष कदम चल्न आवश्यक छ । यसको लागि जनताहरुले पनि सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न अवश्यक देखिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सुधार भएन : पत्रकार महासंघ
गुल्मीमा पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो